dhiri: apple ipad mini 4 wi-fi 128gb iri 25% kubviswa pane zvakanak kutenga
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Apple iPad Mini 4 Wi-Fi 128GB iri 25% kubviswa paKutenga Kwakanyanya
Iyo Mini-makore maviri iPad Mini 4 iri kutengeswa zvakare, saka kana usina & apos; tenga yakachipa Android slate kana inodhura Apple piritsi, unogona kufunga nezvechibvumirano ichi.
Best Buy ikozvino inopa iyo Wi-Fi chete vhezheni yePad Mini Mini 4 128GB ye $ 299.99 chete, saka iwe & apos; uchange uchichengeta $ 100 paunenge uchitenga. Iyo slate inouya mune matatu mavara akasiyana: Space Grey, Sirivheri, uye Goridhe.
Pamwe chete netafura, vatengi vanoitenga vanogashira kunyorera kwemwedzi mitanhatu kuTrend Micro Internet Security, software inofanirwa kuchengetedza kusvika pamidziyo mitatu (PC, Mac, Android iOS uye mahwendefa eWindows uye mafoni).
Ichi chigadzirwa chinyowani, asi kana usinga fungi-rakavhurika-bhokisi, unogona kuwana iyo iPad Mini 4 Wi-Fi 128GB yemutengo unodhura zvishoma pa $ 284.99. Zvinogona kunge zvisina kukodzera kunetseka, asi sarudzo iripo kana iwe uchida kuitora. Zviripachena, kutumira kwemahara kunosanganisirwa futi, pamwe nezvose zvekutanga zvishongedzo uye garandi.
ku & t 5g kufukidzwa
Yakatengwa LG G3 (D-850) benchmark skrini inosimbisa QHD kuratidza, mazano kune octa-core MediaTek processor
Vhiki rino & apos; yakanakisa T-Mobile Chipiri kupa haina kumbobvira yaenda kurarama, uye vatengi vakajeka